र तपाईंलाई थाहा किन पात बीट देखि रातो? पातहरु रातो र मोड के बारी भने
सकरखण्ड - धेरै unpretentious तरकारी बाली। पनि न्यूनतम मर्मतका परेशानी cottagers यसलाई सानो सुनाउँछन्। तर, समस्या, पाठ्यक्रम, त्यहाँ बढ्दो र यो बोट हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, माली अक्सर किन पात बीट देखि रातो आश्चर्य। वास्तवमा, यो घटना को कारण केही हुन सक्छ।
अक्सर, चुकंदर पात किनभने यो ट्रेस तत्व को कमी को रातो रंग परिवर्तन गर्नुहोस्। धेरै सरल तरिका हुन सक्छ माटो को सोडियम सामग्री वृद्धि गर्न। बीट संग एक बिस्तर, बस नुनीन खन्याउन। यसको तयारी लागि साधारण नुन को 250 ग्राम पानी दस लिटर मा भंग गर्न। प्रति मीटर अवतरण समाधान को बारेमा एक लीटर प्रयोग गर्न आवश्यक। टीन बीट यसरी मूल मा आवश्यक छैन, र पात सही।
"पात किन रातो सकरखण्ड बारी गर्छन्" ठीक सोडियम को अभाव छ: तर, यो प्रक्रिया मा embarking अघि, प्रश्नको जवाफ कि निश्चित गर्नुहोस्। माटो मा ट्रेस तत्व को एक अतिरिक्त कम पैदावार हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई। हामी सबै राम्रो परिणाम, उदाहरणका लागि, तरकारी बाली को खेती मा हासिल भएको नुन marshes मा, धेरै गाह्रो गर्न भनेर थाहा किनभने।
फस्फोरस र पोटासियम
के अरू त्यहाँ किन पात बीट देखि रातो बारी को प्रश्न जवाफ हो? को प्लेट पहिलो मधुरो भने छ र धेरै darkened, र त्यो रातो पछि, त्यसपछि कारण सम्भवत छैन सोडियम को अभाव छ। बिरुवाहरु गर्न सायद पर्याप्त फस्फोरस। माटो मा यसको सामग्री उपयुक्त मल गरेर हासिल गर्न सकिन्छ वृद्धि गर्न। तपाईं उदाहरण superphosphates लागि, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कहिलेकाहीं truckers प्रश्न र किन चुकंदर रातो र मुड पात (एक साथ) मा। यो समस्या प्रायः माटो मा पोटासियम को जब कमी हुन्छ। जब आफ्नो उज्ज्वल हरियो रंग गुमाउनु र त्यसपछि धेरै गाढा रातो रंग (लगभग बकाइन) बन्न पूर्व र कर्ल गर्न सुरु यो थाली। के केही पोटाश को बेड मा प्रविष्ट गरेर सम्भव छ यो मामला मा स्थिति सुधार। राम्रो समाधान पनि लाउने काठ खरानी गर्नेछ। प्रति बेड को वर्ग मीटर यो सामान्यतया एक गिलास प्रयोग गरिन्छ।
माटो को अनुचित पीएच प्रतिक्रिया - किन पात बीट देखि रातो बारी को प्रश्न पनि एउटा उत्तर। यस मामला मा के गर्न? सबै को पहिलो, को पाठ्यक्रम, बगैचा मा माटो को पीएच स्तर निर्धारण। सकरखण्ड - एक बोट, तटस्थ माटो रुचि र बिल्कुल अम्लीय सहनु छैन। माटो प्रतिक्रिया सरल छ जाँच गर्नुहोस्। तपाईं उदाहरण, लिटमसकागज लागि, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पनि सिरका र पाक सोडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माटो को पीएच निर्धारण। कागज छैन भने, तपाईंले भर्खरै यो पानी र कुनै पनि समतल सतह मा "केक" बनाउनको लागि, बगैचा बाट पृथ्वीको एक गांठ लिनु आवश्यक छ। त्यसपछि माथि पोख्नुहोस् एक सानो खानको। त्यहाँ बुलबुले को रिलीज संग प्रतिक्रिया छ भने, यो माटो alkaline भन्ने हो। या त तटस्थ वा अम्लीय - त्यहाँ नभएसम्म केही छ।
अर्को तपाईंले थप एक "केक" बनाउन र सोडा माथि खन्याउन गर्न आवश्यक छ। यो प्रतिक्रिया कारण भने - यसैले, माटो अम्लीय छ, र यो किन पात बीट देखि रातो बारेमा अब चिन्ता गर्न सम्भव छैन। कारण, शायद, कि छ।
बीट संग बगैचा मा माटो Deoxidize काठ खरानी प्रयोग गरेर राम्रो हो। तपाईं, पाठ्यक्रम, लाग्न सक्छ र डोलोमाइट पीठो वा कागती। तर, यी तत्व माटो मा बरु "कुनै न कुनै" कार्य। खरानी कुनै पनि मामला जडें चोट छैन छ। यसको deoxidation लागि सामान्य प्रवाह पीएच को स्तर मा निर्भर गर्दछ। औसत मा, यो प्रति 1 मिटर2100 ग्राम थियो।
किन मुड पात
यसरी, किन पात बीट देखि रातो हामी पत्ता लगाउन छौँ। यस मामला मा के गर्न, अब तपाईंले थाह छ। त्यो बस मुड प्लेट - तर कहिले काँही माली यस संस्कृति अर्को समस्या छ। तिनीहरूले शरमाना भने - कारण सम्भवत पोटासियम कमी छैन निहित छ, तर हार लाईकीराको मा। यस मामला मा, प्लेट को underside मा स्पष्ट यी melenkih हरियो कीरा र आफ्नो लार्वा खैरो देखिने colonies छन्। लाईकीराको चुकंदर तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ लड्न। अन्यथा, पात चाँडै पहेंलो बारी र सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो हुनेछ घुमाउरो।
चुकंदर aphid सर्वश्रेष्ठ प्याज छाला निकाल्ने (प्रति 10 लिटर 200 G) वा लागूपदार्थको "Aktofit" संग प्रक्रिया seedbed। तपाईं पनि2Tbsp मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। एल। तरल साबुन, 50 ग्राम सुर्ती धूलो र पानी सबै लीटर भर्नुहोस्।
किन पात पहेंलो बारी गर्छन्
को बीट पनि अक्सर पानी हाले भने यो समस्या प्रायः हुन्छ। पातहरु को आफ्नो हरियो रंग माटो नाइट्रोजन मल को अभाव को कारण हुन सक्छ पनि गुमाउन। सामान्यतया यो पहेंलो को नसाहरु देखि फैलाउन सुरु र रेकर्ड वृद्धि slows।
8 वा 1:12 चरा गोबर जस्ता समस्या को घटना मा फिड चुकंदर 1 को एक एकाग्रता mullein गर्न सकिन्छ। को बेड को प्रति वर्ग मीटर समाधान को 1-1.2 लिटर प्रयोग गर्नुपर्छ।
खैर, आषा हामी पर्याप्त किन पात बीट देखि र जो कारण तिनीहरूले कर्ल गर्न सक्नुहुन्छ लागि रातो बारी को प्रश्न गर्न विस्तृत जवाफ हो। तपाईं यस्तो समस्या अनुभव भने, यो खरानी को ओछ्यानमा बनाउन र खाद्य नुन को एक कमजोर समाधान यसलाई फेंक गर्न संभावना छ। लाईकीराको छिडकाव (जलसेक प्याज छाला) धपाउने गर्न सक्नुहुन्छ, र पहेंलो प्लेट को मामला मा चुकंदर mullein खुवाउन पर्छ।
Greenhouses को प्रकार र आफ्नो डिजाइन (फोटो)
सजावटी खरायो: जीवन र थुनामा को अवस्था
एक कताई बोट के हो? विकास बिरुवाहरु कताई: उदाहरणहरू
तपाईं रोग र turkeys को यसको उपचार के थाहा छ?
टमाटर सुन्तला स्ट्रबेरी जर्मन: विविधता को विवरण, समीक्षा
विद्युतीय मुद्रा corrector: निर्देश पुस्तिका, समीक्षा
वृष महिला। विशेषता साइन
घर उपकरण र सामान। हामी उपयोगी कुराहरू के गर्न सक्नुहुन्छ
पोर्क royally - छुट्टी तालिकाको लागि एक सभ्य भोजन
लक्षण, उपचार र वयस्कों मा खसों को लक्षण
को योनी घन्टी के हो? आवेदन र समीक्षा
कसरी बाल थप सुन्दर बनाउने?
Pokemon Piplap: वर्णन, विशेषताहरु, विकास
लक्षण: बादल मूत्र, कारणले
छूत-वेल्डिंग मिसिन: विशेषताहरु, उत्कृष्ट मोडेल र निर्माता समीक्षा तुलना